Tag: warbaahinta bulshada oo lacag lagu bixiyo | Martech Zone
Tag: warbaahinta bulshada oo lacag la bixiyo
Kani waa macluumaad kale oo weyn oo ka socda CJG Digital Suuq-geynta, 10 Isbeddellada Suuqgeynta ee Warbaahinta Bulshada si aad u Daawato Sannadkan 2015. Waa muhiim in dib loo eego waxyaabaha aad ka kooban tahay, istiraatiijiyadda bulshada iyo mobilada si loo ogaado meesha laga yaabo inaad waxoogaa dhimman ka leedahay. 10 Isbeddellada Suuqgeynta ee Warbaahinta Bulshada si loo Daawado Sannadkan 2015 Suuqgeynta Mawduucyada ayaa sii wadaya inay helaan bulsho badan. Waqtiga Real Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada waxay noqon doontaa hadal heyn. Maqal iyo Muuqaal ayaa xukumi doona waxyaabaha bulshada ka kooban. Waxaa jira isbeddel joogto ah, oo joogto ah